EJJENNOO LUBOOTA OROMOO HAALA UUMMANNI OROMOO BARA KANA KEESSA JIRU IRRATTI. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooEJJENNOO LUBOOTA OROMOO HAALA UUMMANNI OROMOO BARA KANA KEESSA JIRU IRRATTI.
Onkoloolessa 27, 2020
Nuti Luboota Waldoota Kristiyaanaa Warra Wangeelaa biyya aambaa keessatti gurmaa’an
waamicha Waaqayyootiin adda baanee saba Waaqayyoo tajaajillu; Tokkumma Waldoota
Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Afaan Oromootiin waaqeffatan keessatti haammatamnne
wangeela fayyinaa labsaa jiruudha.
Waraqaa ejjennoo kana akka barreessinuuf kan nu dirqisiise rakkina/muddama ummata keenya uummata Oromoo irraa ga’aa jiruudha. Akka Luboota uummata Oromoo keessaa dhalatnneetti wanti uummata keenya irra ga’aa jiru heddu waan nu yaadchiseefi. Hacuucaan saba kana irra jiru bara dheeraa kan lakkobsise haa ta’u iyyuu malee inni bara amma keessa jiru kana keessatti saba keenya irra ga’aa jiru isa yoomii irra iyyuu caalaa ta’uun isaa garaa keenya madeessee boqonnaa nu dhowwee jira. Guddaa kan nama yaaddessuudha. Waan ta’aa jiru kana cal jedhanii ilaaluun itti waliigaluutti waan lakkaa’amuuf itti gaafatama jalaa nun baasu jennee amanna.
Dhiittaan mirga dhala namaa; hidhaa fi dararaan seeraa alaa; nama qabeenyaa isaatiin wajjin ibiddaan gubuun; ajjeechaan; haala sukanneessaa ta’een jumlaan ajjeesuun, fannisuun, qaluun, awwaala dhorkanii reefa binensaaf kennuun, kan kana fakkate hundumaa saba kana irratti raawwatamaa akka jiru dhaga’uun heddu nama dhukubsa. Hunda kessaa immoo haadha mucaa garaatti baattu mucaa ishee wajjin, jaarsoliin waggaagota torbatamaa olii ija sukkummachuu tokko male human waraanaa mootumaa Itiyoophiyaatiin ajjeefamaa jiru. Shamarranii fi dubartoonni heddu loltoota mootummaatiin gudeedamaniiru, gudeedamaas jiru. Akkasumas Oromiyaa keessatti Luboonni Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa, hojjetoonni Wangeelaa, faarffattonni, Jaarsoliin Waldaa, amanttoonii, Kristiyaanonni biroonis, Sheekonnii fi hordoftoonii amantaa Muslimaa Oromoo kan ta’an human waraanaa mootummaa Itiophiyaatiin gara-jabinaan ajjeefamaniiru, ajjeefamaas jiru. Samichaan, qe’ee isaanii irraa, lafa isaanii irraa ari’atamanii abbaa biyyummaa dhabanii, beelaan, daaraan, iddoo mataa isaanii itti irkifatan dhabanii akka
bineensa bosona keessaa olii fi gadi jooraa jiru. Jaarsoliin Oromoo, beektota aadaa fi duudha Oromoo kan ta’an hidhamaniiru, kaanis ajjefamaniiru. Dhi’odhuma kana Lubi Waldaa Ortodoxi Afaan Oromootiin wangeela waan lallabeef ajjeefamera. Kun hundinuu guddaa nama gaddisiisa, nama boosisas.
Nuti Luboonni Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa hundeen amantii keenyaatii fi kan nuti
akka Kristiyaanotaatti ittiin jireenya keenya geggeeffannuu fi ittiin qajeelffamnnee Waaqayyoo fi nama tajaajillu Macaafa Qulqulluu dha. Macaafni Qulqulluun, Waaqayyo nama kan ta’e hundumaa akka bifa Isaatti, akka fakkaatti Isaatti ofitti aansee uume jedha (Seera Uumamaa 1:26-27; Macaafa Faarfanna 8:5-6). Ulfinaa fi guddinaan gonfee uume. Waaqayyo yommuu nama uume namni akka nagaa fi jaalalaan walii wajjin jiraatuuf fedha Isaa ture. Akkasumas uumama hundumaa irratti aboo fi itti gaafatamummaadhaan akka bulchu, akka kunuunsuuf ture. Garuu abboommi Waaqayyoo cabsuu namaa irraa kan ka’e yaadi Waaqayyo ilmaan namaatiif qabu manca’e. Isa manca’e kanaaf furmaata argamsiisuuf Waaqayyo karaa rajotaatti fi karaa namoota adda addaa moototaa fi geggeessota sabaa isaa ifateera. Fakkeenyaaf: Eliyaas raajichaa fi Ahaab mootii Israa’el (Macaafa Moototaa Isa Duraa 21:1-24). Warri tajaajiltoota Waaqayyoo ta’an akka sagalee Waaqayyootti mirga dhala namaatiif falmuuf , warra abbaan irra hin jireef, haadha iyyeessaatii fi warra sagaleen isaanii dhaga’ama dhabe hundaaf sagalee akka ta’aniif
waamaman (Macaafa Fakkeenyaa 31:8-9; Macaafa Faarfannaa 82:2-4). Raajii Isaayaas 58:6-7 keessatti “warra firdii jal’aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo ittii furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, waanjoo hundumaa isaan irraa cabsuu, warra beela’an nyaachisuu, hiyyeessa olii fi gadi jooruuf iddoo bultii kennuu, isa qullaa ta’e daara baasuu” nu barsiisa.
Yohannis Cuuphaan yommuu tajaajila isaa jalqabe waan inni namoota gara isaa dhufaniin jedhe argina (Luqaas 3:10-14). “Uffata lama kan qabu kan hin qabnneef haa kennu, nyaata kan qabu warra dhabaniin haa ga’u” jedheen. Warra qaraxa fuudhaniin immoo “kan murame irra caalchiftanii hin fuudhinaa” ittiin jedhe. Warra loltuutiin immoo, “gidisiifttanii horii nama tokko irraa illee hin fudhatinaa; sobaan nama tokko iyyuu gara abbaa firdiitti hin geessinaa; mindaan keessan inni isin fudhattan isin haa ga’u” jedheen. Akkasumas Yohannis Cuuphaan Herodis mooticha ija jabinaan “Haadha manaa obboleessa kee duraa fudhachuun kee sirrii miti” jedhee ijatti itti himee jira (Maarqoos 6:18). Kana gochuu isaatiif immoo aarssaa ta’e, ni ajjeefame.
Gooftaan Yesus Kristosis jalqaba tajaajila isaatti “… sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera; warra booji’amanitti akka gad dhiifaman labsuudhaaf; warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf; warra cunqurfaman luba baasuudhaaf; waggaa ayyaana jaalala Gooftaa labsuudhaaf na ergeera” jechuudhaan tajaajila isaa jalqabe (Luqaas 4:18-19). Ergaan kun egaa nu warra har’a tajaajilaaf waamannetti kennamee jira. Phaawulos ergamaan kana irra dhaabbatee akkas jedha, “Egaa nuyi afaan Kristos taanee ergamnneerra” (2 Qor. 5:20).
Biyya tokko keessatti uummati nagana jiraachuuf mirga lammii biyyatti hundumaati jennee
amanna. Biyya tokko keessatti nagaan waliin jiraachuuf uummati jireenya isaa nagaan
geggeeffachuu akka dandda’u gochuudhaaf ga’een mootummaa ol-aanaadha jennee ammanna. Haala amma keessa jiramu kanatti garu kun ta’ee hin argamnne. Haala kana keessatti egaa sagalee keenya dhageessisuun kan nu irraa eegamu.
1. Waan suukanneessaa humna waraanaa mootummaa Itiyoophiyaatiin uummata keenya
uummata Oromo irra ga’aa jiru cimsinee balaaleffanna.
2. Dhittaa mirga dhala namaa uummatoota cunqurfamoo biyya Itiyoophiyaa keessa jiraatan
hundumaa irra gaa’aa jiru cimsinee balaaleffanna.
3. Tarkaanfii uummati Oromoo geggeessota akka hin qabaanneef mootummaan Itophiyaa
fudhachaa jiru cimsinee balaaleffanna, atattamaans akka dhaabatu gaafanna.
4. Hidhmtoonii siyaasa Oromoo, akkasumas kan biro hundinuu hala-duree tokko malee
atattamaan akka gadi dhiifaman cimsinee gaafanna
5. Haasaa itti aanaan Muumicha Ministeraa Obbo Damaqa Makonnenni fi Ulfaatoo Abuna
Matiyas, Patriarchi Waldaa Ortodox Itiyophiyaa, waa’ee saba hidhachiisuu irratti
dhi’eenya kana godhan sabaa fi sablamoota gidduutti ibida qabsiisuu waan ta’eef akka
tajaajiltoota wangeelaatti cimsinee balaaleffanna.
Egaa, nuti Luboonni Oromoo dhiphina kana hin jedhamnne uummata keenya irra ga’aa jiru
callifnnee ilaaluu hin danddeenyu. Ummanni keenya gidiraa isa irra ga’aa jiru kana jalaa akka blisa ba’u, biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta’ee, qe’ee isaa irratti kabajamee nagaan akka jiraatuuf hawwee guddaa qabnna, akka dhugoomfamuufis cimsinee dhamaana, Waaqayyoonis cimsinee kadhanna.
1. Luboonni Waaqayyo biraa waamicha argattanii saba Waaqayyoo tajaajiltan hundumti
keessan, Waldoonni Kristiyaana hundi, uumama harka Waaqayyoo kan ta’e akka bifa
Waaqayyootti akka fakkaatti Isattis kan uumame kanaaf itti gaafatamtoota ta’uu keessan
beekttanii (Seera Umamaa 4:9; Luqaas 10:27, 37) rakkoo fi gidiraa jechaan ibsuun nama
rakkisu saba Oromootti fi saboota kan biro Itiyoophiyaa keessa cunqurfamaa jiraniif
furmaati akka argamuuf yaadaa fi kadhata keessaniin nuu wajjin akka dhaabbataniif
waamicha onnee irraa madde isiniif goona.
2. Akkasumas Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmitan hundinuu dhiittaa mirga dhala
namaa humna waaraanaa mootummaa Itiyophiyaatiin saba keenyaa fi saboota biroo irratti
raawwatamaa jiru kanaaf nu waliin taatanii sagalee akka isaaniif taataniif jaalalaa fi kabaja
guddaadhaan waamicha isiniif goona.
– “bulchi qajeelaan akka bishaaniitti, qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa’uutti haa burqu” (Macaafa Amos Raajichaa 5:24).
Nuti Luboonni maqaan keenya aarmaan gaditti barreeffame hojii Waaqayyootiif addaa
baafmnnee Waldoota Kristiyaanaa Warra Wangeel Oromo biyya aambaa kan tajaajilaa jirru,
dhiphinni uummata Oromo irra akkasumas uummatoota kan biraa Itopiyaa keessa jiraatan irra ga’aa jiru hamma malee waan nutti dhaga’amee fi sagaleen Waaqayyoos warra sagaleen isaanii uukkaamameef sagalee akka taanuuf waan nu dirqisiisuuf: Luboonnii hundinuu; Dhaabbileen Mirga Dhala Namaa (Human Right Organizations) hundinuu akka nu cina dhaabattanii dhittaa mirga dhalaa namaa suukanneessaa ta’e humnna waraanaa mootummaa Itophiyaatiin saboota irratti raawwatamaa jiru kanaan akka mormitaaniif kabajaa guddaadhaan waamicha isiniif goona.
1. Rev/Dr Debela Birri Life Stream Oromo Evangelical Church of Chicago, IL
10. Rev Alemayehu O Wedajo: Oromo Evangelical Church of Washington, DC
14. Rev Kasahun Tesso: Oromo Evangelical Church of Lancaster, Pennsylvania
15. Rev Gemechis Guja: Oromo Evangelical Church of Lancaster, Pennsylvania
18. Rev Kefyalw Amente: Power of Gospel Church in Minneapolis, Minnesota
21. Rev Eticha: Oromo Evangelical Church of Edmonton, Canada
32. Rev Alemu Sombo: Living Hope Oromo Christian Church of Australia
34. Rev Duressa M Teka:
36. Evanglist Wasihun Gutema: EL-Shaddai Oromo Evangelical Church of Washington, DC
38. Rev Wake Jeo Gerbi: The Power of God Church in Oslo. Norway
39. Pastor Aden Kamiso: Christ Kingdom Church in Phoenix, Arizona
40. Pastor Guyo Galgalo: Oromo Evangelical Church of Phoenix, Arizona
Cell 503-267-2428| Email: sonakamiso@gmail.com/ http://www.uoec.org